Fọm YK11 dị arọ (431579-34-9) hplc ma98% | AASraw SARMS ntụ ntụ
/ ngwaahịa / SARMS / YK11 ntụ ntụ
SKU: 431579-34-9. Category: SARMS
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke ugbo YK11 (431579-34-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
YK11 ntụ ntụ video
Raw YK11 ntụ ntụ bụ isi ihe
Molekụla Formula: C17H27Cl2N
Raw YK11 ntụ ntụ iji mee ihe na steroid steroids
Myostine na-akpọkwa YK11 (CAS 431579-34-9).
Raw YK11 ntụ ntụ Usage
Were 5MG-10mg n'ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na ọkwa YK11
Ihe dị mma banyere SARMS bụ na mmetụta ya dị ntakịrị, n'ihi ya, ị gaghị echegbu onwe gị banyere nsogbu ọ bụla.
SARMS, tinyere YK11 na-ewu ewu na ụlọ ọrụ ndị na-ewu ahụ ma isi ihe mere nke a bụ n'ihi na ha nwere ike inyere gị aka inweta ahụ ike na ịhafu abụba. Nke a yiri nke a ma e jiri ya tụnyere AAS mana ihe kachasị mma bụ na ha agaghị enye gị ụdị nsogbu ọ bụla. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ị ga-enweta na-agụnye ọbara mgbali elu, HPTA mmechi, mmebi imeju na ihe ndị ọzọ. SARMS anaghị enye gị mmetụta ndị a n'ihi na ha na-ahọrọ ndị ọzọ na ebe ha na-elekwasị anya ka i wee nwee ike inweta uru ahụ uru na abụba.
YK11 Powder Powder (CAS 431579-34-9)
Raw YK11 ntụ ntụ Marketing
Otu esi azụta YK11 ntụ ntụ (CAS 431579-34-9) sitere na aasraw
YK11 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
Ịzụta YK11 ntụ ntụ: Nyocha & Uru & Mmetụta mmetụta